Nyochare okporo ụzọ egwu na nchịkọta gị? - Jụọ Semalt Ihe Ị Ga-eme
Julia Vashneva, Semalt Onye ahịa na-ahụ maka ndị na-aga ahịa, kwenyere na darodar.com bụ isi ihe kpatara ihe mere na ebe nrụọrụ weebụ gị na-enweta ọtụtụ ntinye akwụkwọ ozi, na forum.topicxxxxxxx.darodar.com nwere ike ibibi gị ọkwa saịtị na ịntanetị n'oge na-abịa. Ọ bụ ya mere ị ga - eji jụọ onwe gị ihe ị ga - eme iji wepụ nsogbu a - moel ligne. Ọ bụ nkuzi gị? Ọ bụ eziokwu na ị depụtaghachiri ma kpocha ya na ihe nchọgharị weebụ gị. N'ihi ya, ọ kpatara nsogbu maka gị ma kpọbata gị na peeji nke Aliexpress (ụlọ ọrụ Alibaba). N'ebe a, ị ga - ahụ ihe ndị ezumike na onyinye a na - akwụ ụgwọ na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama.
Mgbe ọ na-abịa na ịpị kpọmkwem na-ezo na webmaster ngwá ọrụ, ọ ga-ewetara gị darodar.com, sụgharịa redirecting gị ka a Russia website mara dị ka iloveitaly.ru. Mgbe nke a gasịrị, a ga-ebute gị gaa na Aliexpress subdomains nwere kpọmkwem ụdọ na njedebe "aff_platform = aaf & sk = YNRjYvfmq: & cpt = 1420754856013 & null."
Ị nwere mmasị ịmata ihe ọ pụtara? Ọ pụtara nanị na kọmputa gị enwewo ihe hacked na ebe nrụọrụ weebụ gị na-anata darodar.com ntinye aka..Ọbụna mgbe ịzụrụ ụfọdụ mmemme na ngwanrọ, ọ gaghi abụ ihe a ga-atụ anya na ụzọ ntanetị ga-egosi na akaụntụ Google Analytics gị. Onye na-egwu ihe nwere ike ị na-agbalị ịkwọ ụgbọala na-abaghị uru na ebe nrụọrụ weebụ gị na-enwe olileanya na onye ga-azụta ngwaahịa site na njikọ ndị ahụ. Olee otú ndị omere ụgbọala si zuru ozi gị wee banye na Google Analytics? Azịza dị mfe bụ na ha etinyela okporo ụzọ. E nwere ọtụtụ ihe nchịkọta akụkọ nke ndị na-azụ ahịa okporo ụzọ na-eme ka ndị ọrụ nwuo, na-ahapụ ha ka ha zitere gị ọnyà ọjọọ ma mebie aha gị. Ị ga-ahụkarị ndị na-ekwu okwu ụgha na Google Analytics n'ihi na ha na-aghọgbu ndị ọrụ yana Google gburugburu elekere.
N'ọnọdụ dị otú ahụ, onye na-achọ ịbanye na saịtị gị nwere ike ịzụta ihe site na njikọ ya ma nwee ike ịnye nza nha. N'ụzọ dị mwute, ndị ahịa na-eji okporo ụzọ na-azụ ahịa darodar.com na ngwanrọ adịgboroja iji kwalite ngwaahịa gị. Ha na-achọ ịmegharị ndị ọbịa ha na ndị ahịa ma tọọ ha n'ọtụtụ ụzọ. Otu ihe atụ dị otú ahụ bụ spam na-adịghị agwụ agwụ nke otu ụlọ ọrụ aha ya bụ Cenoval.
Ụlọ ọrụ a emeela ọtụtụ ọnụọgụ ntinye aka na ogbe ọjọọ ma jiri mgbagwoju anya na malware maka ịbanye kọmputa gị. Ọ na-eziga okporo ụzọ ọjọọ nye ndị ahịa ya, ma a pụrụ ịhụ okporo ụzọ yiri ya na mmemme nchịkwa darodar.com kwa. N'ihi ya, ị kwesịrị ịhapụ marodar.com na cenoval.ru, na-eme ka nchebe nke saịtị gị na ịntanetị.
Nke kachasị mma, ụzọ kachasị mma ma dị mfe iji merie nsogbu ndị a bụ ịmepụta nzacha. Nchịkọta ga-enyere gị aka iwepụ spam na data Google Analytics gị. Nhọrọ, ị nwere ike ịgbanwe ntọala na faịlụ .htaccess. Ụbọchị ndị a, webmasters na-eji ma nhọrọ abụọ a iji gbochie ndị na-agba ọsọ na-ezu ohi ozi ha. Ị nwekwara ike ịnwale nhọrọ abụọ a, ma ana m akwado gị ka ịmepụta nzacha iche maka weebụsaịtị ọ bụla. Gbalịa otu n'ime ụzọ ndị a ma hụ na nchekwa gị.